I-khilimu iyimveliso yokonkcoka efunekayo ekunyamekelweni kwesikhumba kwanoma yiyiphi iminyaka. Kwixesha la mandulo, ugqirha uGalen wenza umxube kangangokuba iinqununu eziliqela kwakuphela kuphela ukhilimu. Iimveliso zonyango zanamuhla zesikhumba zininzi kakhulu. Yisiphi ukhilimu ukhetha? Namhlanje siza kuthetha malunga nokukhetha ukhilimu womntu emva kweminyaka engama-30.
Okukhethiweyo kufuneka kusekelwe kwinkcazo yemisebenzi ekrelekrele okufanele iyenze. Ukunyusa, ukunyusa, ukumisa, ukukhusela? Into ebalulekileyo ekukhetheni i-cosmetic ethile yinto yobudala kunye nesikhumba. Kodwa, ukuba uyayiqonda yonke into eneminyaka yobudala, ngoko kufuneka uhlalutye iintlobo zekhumba kuqala.
Kukho iintlobo ezine eziphambili: eziqhelekileyo, ezinqatha, ezomileyo kunye ezidibeneyo (ezixutywe).
Ikhumba elomileyo lithinteka kakhulu kwimpembelelo yangaphandle. Ngokuba ulusu lube nolwahlulo kunye nokuvakalelwa. Ngelishwa, isikhumba esinjalo sivelele ngakumbi kunabanye ukubonakala kwangaphambili kwemibimbi. Iindlela zokunyamekela kwesikhumba esomileyo ziquka iimvakalelo. Ezi zizinto ezinamafutha ezinqamle kwiindawo eziphezulu zesikhumba kwaye zinefuthe lokunciphisa. Ama-emollients afaka i-silicones, i-wax, i-oil oil, i-glycerin, i-squalane. Kwikhumba elomileyo, i-cream e-hyaluron okanye i-hyaluronic acid inomdla kakhulu. Yinto encedisa ulusu ukugcina umswakama.
Ikhumba elinamafutha libonakaliswa ngama-pores awandisiweyo, ukukhanya kwamafutha, ukubonakala rhoqo kwamachashaza amnyama. Kodwa kulolu hlobo lwesikhumba kukho neenzuzo ezingathandabuzekiyo. Imisipha yamandulo kule ngxaki ayiyibi. Ngokuphambene noko, ngokunyamekela kakuhle, nangeminyaka engamashumi amane ulusu lunokubonakala lubutsha. Ukunyamekela ulusu olunamafutha, kufuneka ukhethe iindlela kunye nokunciphisa amanqaku okukhululwa kwamafutha. Esi sikhilimu kunye nezicatshulwa ze-chamomile, yarrow, calendula. Umphumo ozukileyo kwesikhumba seoli kunikwe ioli ehlaziwayo, elawula ukulinganisela kwamanqatha amanzi. Iindlela zokunyamekela kwesikhumba seoli kufuneka zibandakanye i-antiseptics ezithintela ukuveliswa kweebhaktheriya. Musa ukugqithisa isikhumba seoli, kungenjalo kuya kuphelisa.
Uluhlu lwesikhumba oludibeneyo luqhelekileyo. Ikwahluke kwi-gloss grass ebunzini, impumlo kunye ne-chin, okubizwa ngokuba yi-T-zone. Uluhlu lwesikhumba oluxubileyo, olona luphawu oluphezulu, kwaye ngelo xesha, indlela eninzi eyinkathalo yokunyamekela yindlela yokusebenzisa izimonyo ezahlukeneyo kwiindawo zesikhumba.
Ngethamsanqa, kwiimveliso ezikhethekileyo zolu hlobo lwesikhumba oludibeneyo, ezi zixhobo zibonelelwa. Zizinto ezinokulinganisela kunye nokumisa izinto. Ukuze ulusu lube luhlobo olufanelekileyo lwe-cream, olubandakanya i-sage, plantain.
Ikhumba eliqhelekileyo lihamba kakuhle, akukho mvakalelo yokuqina kunye nokukhanya kwebala. Ukulondoloza isikhumba kwiimeko ezintle kukuba kubalulekile umsebenzi wekhrimu yolu hlobo lwesikhumba oluqhelekileyo. Kufuneka zibandakanye izixhobo zokumisa nokukhusela. Ngokomzekelo, i-oyile yamaminerali, iifomile ze-chamomile, i-alo, i-algae.
Ngokweminyaka yobudala, iindawo eziphezulu zesikhumba zincinci. Ngenxa yokuba isikhumba somile, ukujikeleza kwegazi kuye kwancipha. Ukubunjwa kwanaluphi na ukhilimu kuhlala kumanzi, imifuno kunye nemfuyo. Banceda ukugcina umswakama ebusweni besikhumba.
Emva kweminyaka engamashumi amathathu, ulusu luyimfuneko kakhulu ekunyanzelekeni okusisigxina. Ngokuqinisekileyo, ukuguga yinkqubo yendalo, engenakuphetshwa, kodwa inokuphuculwa kakhulu. Ngokungafunekiyo, kodwa, sele ibonakale ibonakala, ayiyi kutshabalala. Kodwa unokumisa inkqubo "yokwanda" kwayo - ukuqina nokude. Okokuqala, oku kungenziwa ngokutya okufanelekileyo. Ngaphakathi nangaphandle.
Ukwenza oku, emva kwelanga okanye iinkqubo zamanzi, i-cream cream kufuneka isetyenziswe kwilusu emva kweminyaka engama-30 kunye ne-hyaluronic acid, i-collagen, i-elastin, i-orotiroti, i-creatine, njl. Ezi zinto zihlala zifumaneka kwimveliso yokunakekelwa kwesikhumba kunye nokufaka isandla kwisondlo sayo. Zivuselela ukuvuselelwa kwamaseli, nokwenza ulusu lukhuphe. Ukusetyenziswa kwansuku zonke kwama-cream kunye ne-vitamin A kuya kuba nefuthe eluncedo kwesikhumba. Iingcali zenzululwazi zibonise ukuba iimveliso zokunakekelwa kwesikhumba ezityebi kule vivithamine zikhusela ukubonakala kwemibimbi kwaye zigqithise ezikhoyo. Kukulungele ukusebenzisa le khrimu ebusuku. Ebusuku, isikhumba sithandwa kakhulu kwisondlo kunye nokubuyiselwa. Iimpawu zokuhlwa zinezixhobo ezivuselelayo kwaye ziyaqhubeka ziphila. Iimveliso zentsuku nazo zenza iipropati ezikhuselayo: ukusuka kwelanga, umoya, iqhwa kunye nokulahleka kobuninzi.
Emva kweminyaka engamashumi amathathu unokuqalisa ukusebenzisa iisera ezikhethekileyo ezinokuchaphazela iindawo ezinzulu zolusu. Ziqukethe izakhi ezigxininisiweyo, ezithe zangena esikhumbeni, zibangela ukuba iiseli zisebenze, ngaloo ndlela zinciphise ubungakanani kunye nobunzima bombimbi. Kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba kugxininiswe kwaye iiserafu kufuneka zisetyenziswe kwizifundo. Ngaphandle koko, ulusu luya kulahlekelwa ukukwazi ukuzilungisa.
Emva kwemashumi amathathu, unako kwaye ufanele uhlale uselula kwaye ugcwele amandla, ngaphakathi nangaphandle! Ngoku uyazi ukuba luhlobo luni lwe-cream cream emva kweminyaka engama-30 oyifunayo!
I-Tonic ekhaya: zokupheka kwabantu
Ukulahleka kwesisindo esifanelekileyo. Ukuzivocavoca okuya kukukwenza uphelele
Ukwakhiwa kwegumbi lokulala ngentombazana
Ixesha elihle kakhulu lokukhulelwa komntwana
Amantongomso ancedo kwimpilo yabantu
Isipho sodade kwiintlobo zokuzalwa ezivela kubantwana
Zonke iimfihlo zobomi bomntu siqu ka-Irina Akulova
Ukuphulukiswa kunye nemimoya yobuAdamite